"Mina Larici" Igcine ikholi ngoKhisimusi ♥
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Dolomiti
Isifiso sokunikeza imizwa sesimweni esiyingqayizivele e-Cortina d'Ampezzo uqashe ifulethi elihle esitezi esiphansi "I Larici" elinendawo yokuhlala yangaphandle ukuze ujabulele umbono omangalisayo we-5 Torri, Croda da Lago, Tofane, Cristallo kanye ne-Faloria ethokozisayo. izintaba.
Uma okufunayo kuyisimo sezintaba, isifiso sokuphumula ngemva kosuku lokushushuluza noma ukuhamba ngezinyawo ngenkathi uhlala uxhumene nokunethezeka kwesikhungo indawo ekahle yamaholide akho eDolomites.
Ifulethi eliphansi elinelanga elinetafula elingaphandle elivikelekile namabhentshi abantu abangu-4, ikhishi legesi, usinki, umshini wokuwasha izitsha nohhavini wemicrowave nazo zonke izitsha. Igumbi lokuhlala elinefasitela lokungena kanye ne-panoramic, itafula elinezihlalo, indawo yokufunda / yokusebenzela eneziko, umbhede usofa. Igumbi lokulala eliphindwe kabili elinamakhabethe akhelwe ngaphakathi kanye nethuba lokwengeza umbhede ngokunethezeka, indawo yokugezela enobhavu, ishawa nomshini wokuwasha, izindawo zokupaka ezingaphandle ezi-2 ezibekelwe ngaphandle, indawo yokugcinwa kwe-ski nebhayisikili egalaji.
"Igumbi eliphindwe kabili" imibhede emibili
"Sofa" umbhede owodwa
"I-Cot" ekamelweni (ama-euro angu-20 engeziwe ngokuhlala) okumele ikhokhwe ngaso leso sikhathi
- Bonke abasebenzisi
-Ukushisa ukuze kusetshenziswe kahle
- Ilineni / Igumbi lokugeza / Ikhishi lelineni
- Qala ikhithi yezilokotho
-Indawo yokupaka yangaphandle ibekelwe izimoto ezi-2.
-Ski, indawo yokugcina ibhayisikili njll.
-Ikhishi linazo zonke izinto zikagesi
-Igumbi lokugezela elinomshini wokuwasha
-Izicelo ezikhethekile zingaphansi kwezindleko ezengeziwe okuxoxwe ngazo kusengaphambili nesivakashi
I-Peziè iyathakazelisa ngokubuka okujabulisayo nokunethezeka kwayo phakathi nendawo, indlela yomjikelezo nokunye okuningi.
Ngihlala e-Cortina, mina nozakwethu sitholakalela izivakashi zethu.
UDolomiti Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: LOCAZIONE TURISTICA M0250161543